Brussels dia namoaka torolàlana momba ny fotoana tena izy maimaimpoana ho an'ny fikarohana ny tanàna, miaraka amin'ireo olona mipetraka ao
Home » Lahatsoratra farany farany » Associations News » Brussels dia namoaka torolàlana momba ny fotoana tena izy maimaimpoana ho an'ny fikarohana ny tanàna, miaraka amin'ireo olona mipetraka ao
Associations News • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • People • teknolojia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Manomboka amin'ity fahavaratra ity dia afaka mizaha an'i Bruxelles «tena» ny olona mitsidika ny renivohitra eropeana. Izany dia noho ny visit.brussels dia namolavola torolàlana an-tserasera sy maimaim-poana amin'ny fotoana tena izy: "now.brussels", fotoana iray tsy manam-paharoa hahita "ny Bruxelles an'ny olona mipetraka eo".
Ary koa ireo zava-manintona nentin-drazana sy mampiavaka azy, Bruxelles dia tototry ny toerana mahazatra sy harena miafina tian'ireo mponina ao aminy. Izany no antony nahatonga an'i visit.brussels, niara-niasa tamin'ny maso ivoho FamousGrey, namorona torolàlana an-tserasera izay misy amin'ny fotoana tena izy: “now.brussels”.
Now.brussels, fitaovana vaovao amin'ny fotoana tena izy hahitana an'i Bruxelles amin'ny fomba hafa
Rehefa mijery tanàna ianao, dia tsy misy fomba hafa tsara kokoa noho ny mitsidika ireo toerana itiavan'ny olona azy. Misaotra an'i now.bruxelles, azo atao izao amin'ny tsindry iray. Now.brussels dia tranonkala manavao izay mamela ny mpitsidika hisafidy izay tiany hatao mifototra amin'ny toerana misy azy ireo, ny toetr'andro, ny zavatra tadiavin'izy ireo amin'izany fotoana izany ary, ambonin'izany rehetra izany, ny tolo-kevitr'ireo mponina ao an-toerana.
Inona avy ireo kafe fisakafoanana an-kalamanjana malaza amin'ny mponina? Aiza no ahafahanao manao fety mandra-pahatongan'ny ora vitsy any Bruxelles? Inona avy ireo hetsika tsy tokony hotadidina? Nomena isa-potoana ireo toerana mafana any Bruxelles, miorina amin'ny lazain'ny mponina ao amin'ny media sosialy (amin'ny alàlan'ny sary, tantara, fanehoan-kevitra, tenifototra…) sy ny toerana misy azy ireo.
Ny hany mila ataon'ny mpampiasa dia ny mitsidika izao.bruxelles ary mampody ny toerana misy azy ireo, ary afaka manomboka ny traikefa nahafinaritra an'i Bruxelles Afaka misafidy safidy telo izy ireo: ny zavatra hatao, ny toerana hisotroana ary ny toerana hohanina. Miorina amin'ny geolocation an'ny mpampiasa sy izay safidin'izy ireo hatao, ny tranonkala dia mampiasa sarintany ifarimbonana hamantarana izay misy ny mponina ao amin'io ora io indrindra. Araka ny habeny sy ny alokalony, ny faritra miloko dia mamantatra ireo toerana be mpitsidika indrindra ny mponina, izay sady akaikin'ny mpitsidika no any amin'ny faritra Bruxelles iray manontolo. Avy eo ny mpitsidika dia mila manapa-kevitra fotsiny hoe inona no hatao, mifototra amin'ny famaritana sy ny sary nakarina momba ny toerana sy / na ny hetsika tsirairay.
Fanandramana “vita tany Bruxellel” tena izy
Aorian'ny fitsidihana ireo zava-nisongadina teo amin'ny tantaran'ny tanàna, ireo mpizahatany dia afaka mankafy ny atmosfera sy ny feon'ireo “tena” Bruxelles. Ny fizahana an'i Bruxelles miaraka izao.bruxelles dia fomba tokana ahazoana aingam-panahy sy fitarihan'ny mponina ao an-toerana, ary koa ny fahitana an'i Bruxelles amin'ny fotoana tena mitovy amin'ny hafainganam-pandehan'ny mponina.